Shabakada ugu fiican ee macluumaadka laga soo saaro ee internetka sida uu qabo Khabiirka Xoogsatada
Tan iyo markii ay internetka bilaabeen kobcinta tayada iyo xajmiga, xiisaha macluumaadka iyo ganacsiyada waxay bilaabeen raadinta xog-ururin ku habboon. Soo dejinta. io iyo Octoparse waxay ku jireen wakhti aad u dheer. Labada qalabba waxay sheegteen in ay xoqeen wax ka badan todoba milyan oo bog ah. Nasiib darro, maaha mid ku habboon labada barnaamij-yada iyo kuwa aan barnaamijka ahayn iyo waxay u baahan yihiin xirfado cod-bixineed. Sidaa darteed, freelancers iyo non-coders sii wadaan raadinta habab ku haboon - buying real youtube subscribers. ParseHub iyo Kimono Labs ayaa noqon kara doorashadaada haddii aadan baran luuqadaha barnaamijka sida Python, C ++, Ruby.
Marka ay timaado qaabeynta iyo qeexidda muuqaalka iyo qaabka boggaaga, barnaamijka ParseHub waa kuu sax yahay. Waxay leedahay Firefox kala duwan oo ay ku xakameyn karaan waxyaabo badan oo website ah adiga oo ku matalaya. Barnaamijkani wuxuu u qaybiyaa websaydh qaybo kala duwan, wuxuu soo saaraa boggagiisa oo dhan, wuxuu ku keydiyaa faylasha, wuxuuna kaydiyaa bogga internetka ee dhamaystiran ee kombiyuutarkaaga si aad u isticmaasho.
Marka aad dooratid website-ka ama blog-ka aad rabto inaad soo saarto, tallaabada xigta waa inaad u ogolaato ParseHub inay shaqadeeda.
Doorashada xoqidda waa mid xoogan oo faa'iido leh. Waxay noo ogolaanaysaa inaan helno oo aan xakameyno sida macluumaadka loo soocayo.
Qalabkeedu waxa uu u habeeyay in lagu xakameeyo goobo kala duwan iyo blogs.
Waxay kuu diyaarin kartaa xogtaada habaysan, iyada oo aan loo baahneyn in la soo dejiyo faylka kasta oo gacanta ah.
API waa mid aad u xoogan oo u muuqda in uu natiijooyinka dib u soo celiyo dib u dhac halkii uu ku guul darrayn lahaa.
Sida ParseHub, Kimono waa barnaamij dhammeystiran . Si kastaba ha noqotee, waxay qaadataa hab cusub oo lagu qariyo xogta adag ee ka dambeeya faylasha sahlan oo aad ku diyaarinayso bogaga ku salaysan qaab-dhismeedkooda iyo qaab-dhismeedkooda. Waxa lagaa rabo inaad doorato waa inaad doorataa website-ka in la soo saaro, ku siiso magac ku meel gaar ah una ogolow Kimono shaqadiisa.
Waa sahlan in la isticmaalo qalab kaas oo lagu dari karo sirta ama nidaamka hawlgalka.
Waxay la socotaa plugin gaar ah oo Chrome ah, natiijooyinkeeda waa la arki karaa ama la soo dejin karaa qaabka dhabta ah.
Barnaamijkan wuxuu u oggolaanayaa in si deg deg ah loo soo saaro xogta saxda ah.
Waxaa jira dukumentiyo kala duwan oo dhexdhexaad ah iyo dukumiinti ah si loo taageero dadka cusub.
Waxay si fudud u maamuli kartaa bogagga internetka ee yaryar iyo kuwa waaweyn.
Waa adag tahay in la yiraahdo qalabkee ayuu ka fiican yahay. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay jawaab celinta iyo dib u eegista dadka isticmaala, ParseHub ayaa ka doorbideysa Kimono. Si kastaba ha noqotee, micnaheedu maaha in Kimono ay ku guuldareysato inay timaado filashooyinkaaga. Dhab ahaantii, labadaba qalabkan fiirinta webkani waxay bixiyaan dheelitirnaan wanaagsan oo u dhaxeysa isticmaalka iyo awoodda.